CPT mabhegi ezviyo anopa yakaderera mutengo yekuchengetedza imwe nzira iyo inochengetedza zviyo zvehunhu kwenguva yakati iyo inopa varimi mukana wekuwana zvirinani misika mamiriro .
Yakaridzwa 750mm Wide Green Silage Firimu
Hunhu hwefuru mu silage bale inoenderana zvakanyanya nehunhu hwekuputira firimu. Yedu silage firimu iri mune yakatsiga yemhando yepamusoro uye inogona kuve yakagadzirirwa kusangana kune ese vatengi zvinodiwa.
Sirivha Nhema Mulch Firimu
Mapurasitiki epurasitiki ave achishandiswa kutengesa pamiriwo kubvira kutanga kwema1960. Mhando nhatu dzemhando yepamusoro dzakashandiswa mukugadzirwa kwekutengesa: nhema, yakajeka, uye Sirivheri nhema yepurasitiki.
CPT yakagadzira yakakwira tembiricha inodzivirira firimu F1406 akateedzana. iyo yakagadzirirwa kutakura kwenzvimbo. Iyo yakachengeteka kurodha tembiricha inogona kuve 120 Celsius madigiri, iyo lab yekuyedza bvunzo inogona kusvika kusvika kumiganhu nemadhigirii zana.
Midziyo uye flexitank liners anowanzo shandiswa seyehupfumi mhinduro yekutakura huwandu hwezvigadzirwa zvemakemikari, zviyo, zviyo, zvinwiwa, zvigadzirwa zvakagadzirwa uye zvimwe.
CPT inogona kukupa iwe mhando yepamusoro, chikafu chinotenderwa, zvinhu zve polyethylene uye inosanganisa yakasimba simba uye kupfava kuti uwane yakakwenenzverwa kushomeka inova inonyanya kukosha chinhu mumudziyo liner bhizinesi.
Yakakwira Mhando yeBale Net
Plastiki Bale Kuputira inova imwe nzira kune twine yekuputira yeakakomberedza hay mabhero. Iyi yakapfava mambure ine zvayakanakira zvichienzaniswa netwine:
mashandisiro emambure anovandudza kugadzirwa nekuti zvinotora nguva shoma kuputira bhari. Unogona kuchengetedza nguva neanopfuura makumi mashanu muzana. Netting inokubatsira iwe kuita zviri nani uye zvakagadzirwa zvakanaka mabhero, uye zviri nyore kufamba uye kuchengeta
© Copyright - 2010-2021: All Rights Reserved. Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, Bale Kuputira Firimu Kutengesa, Chitubu Wire Yekukiya Firimu, Greenhouse Firimu Lock Chiteshi, Mbiri Uye Zigzag Chitubu Wire, Poly Greenhouse Firimu Kukiya Mbiri, Greenhouse Chitubu Lock Mbiri, Zvese Zvigadzirwa